【Holly·House】Izixhobo zaseChina iTriumphal Arch enamagumbi amathathu kunye neeholo ezimbini Isithili seshishini saseVientiane Wanda.Iinkumba ebomvu enomt.Ijikeleze iKale planet.Indawo yokubukela iBauhinia.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu朗读者
Indlu ihonjiswe ngokuthambileyo kwaye yalungiswa, kwaye yonke ibonisa uhlobo lwesitayile seNordic ins.Igumbi lokuhlala likwaxhotyiswe ngezithethi ezi-5.1.Ungabukela iimuvi zeBlu-ray 1080p (zikhutshiwe) Umbala wendlu uwonke. lusekelwe obomvu yaye eziluhlaza, ozaziyo ngeempembelelo umbala, enoba Living okanye ukuthatha imifanekiso bekukho umoya eyahlukileyo
I-China Resources Arc de Triomphe yenye yoluntu olukumgangatho ophezulu eLiuzhou.Uluntu lunamaziko okhuseleko apheleleyo, ukhuselo oluphezulu oluluhlaza, kunye neendawo ezintathu zokonwabisa abantwana.Ilungele ishishini, ukuphumla, kunye nohambo losapho. Ibekwe kufutshane nesixeko saseVientiane, iziko lezorhwebo laseHedong, eLiuzhou.Inokufikelelwa kuhambo lwemizuzu emihlanu ukuya kwisiXeko saseVientiane, apho unokonwabela ukutya, ukuzonwabisa, kunye nokubukela iimuvi. Noodles Liuzhou uMnenke uju ukuba abathengi abaninzi amazwe bafuna ekhuhlangubeni Kukho noodles noqebeyi eziliqela ehlabathini ekuhlaleni:. Yena Shuangluo noodles, noodles Luo Xiaodi noqebeyi, noodles Douyin noqebeyi, Iqhubu mveliso nkumba noodles, njl, takeaway Hetang Ukutya Kulula kakhulu . Ngexesha lokujonga iintyatyambo ngo-Epreli, iperiphery yoluntu yeyona ndawo iphambili yokubukela i-bauhinia.
Kukho iindawo zokudlala zabantwana ezi-3 kwindawo encinci. Indawo yoluntu ilungile. Emva kwesidlo sakusihlwa, ukuhamba kunye nokugijima kulukhetho oluhle.
Ukuba awuqondi, ungaqhakamshelana nam ngexesha kwaye ndiza kukuphendula ngokukhawuleza